जसपाः केन्द्रमा सत्ता, प्रदेशमा घोक्रेठ्याक - नेपालबहस
जसपाः केन्द्रमा सत्ता, प्रदेशमा घोक्रेठ्याक
| १४:२३:१० मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । चरम विवादको भूमरीमा परेको जनता समाजवादी पार्टीका दुबै पक्ष सत्ताको खेलमा पनि सामेल भएका छन् । केन्द्रमा जसपाको महन्थ – राजेन्द्र समूह सत्तासिन हुने अन्तिम कसरतमा छ भने प्रदेश नं. २ को सत्ता भने गुमाउने अवस्था आइपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रष्ट दुई धारमा विभक्त जसपा अब विभाजनको डिलमा छ । एकले अर्काे पक्षलाई कारबाही गरेका छन् भने सत्ताको खेलमा पनि लागेका छन् । महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सम्भवतः आजैबाट ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा प्रवेश गर्दैछ ।
यस प्रयोजनका लागि अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ । मिलेसम्म आजै नै सरकारमा सहभागी हुने दाउमा जसपाका अधिकांश नेता रहेका छन् । तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने पार्टी भित्रको विवाद टुंग्याएर मात्रै सत्तामा जाँदा उचित हुने धारणा राख्दै छन् । राजेन्द्र महतो लगायत अधिकांशको चाहना भने तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा गइहाल्नुपर्ने रहेका छ । त्यसैले ठाकुर दबाबमा रहेका छन् ।
उता, प्रदेश नं. २ मा भने जसपाकै उपेन्द्र यादव समूहले ठाकुर–महतो पक्षलाई हटाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रमा भएजस्तै प्रदेशमा समेत समीकरण बनाउने तयारी तीब्र भएको छ । यसै प्रसंगमा आज उपेन्द्र यादव र कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिबीच अहिले छलफल भइरहेको छ । बानेश्वरस्थित निधि निवासमा छलफल जारी छ ।
निधिसँगको छलफल टुंग्याएर यादव आजै जनकपुर जाँदैछन् । यहाँ बनेको समझदारी अनुसार प्रदेशमा पनि यादवले कांग्रेस , माओवादी केन्द्र र अन्य स्वतन्त्र सांसद्हरुको समीकरण बनाएर महतो पक्षलाई सत्ताबाट हटाउने तयारी गरेका छन् ।
आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, साउनदेखि पढाई हुने २४ मिनेट पहिले
एम्बुलेन्स खरिदका लागि आर्थिक सहयोग २२ घण्टा पहिले
देशभर मनसुन शुरु भएसँगै बाढी तथा पहिराेको जोखिम २१ घण्टा पहिले
भर्खरै मुटुको अपरेशन गरेका युवा नेता शाही जोखिम मोलेर सामाजिक कार्यमा सक्रिय ६ दिन पहिले
वालिङलाई दश लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण ६ दिन पहिले
यार्सागुम्वा सङ्कलन गर्न पाटन गएका नागरिक २ दिन पहिले
जसपाको यादव पक्षले सोध्यो महन्थ ठाकुरलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम २ हप्ता पहिले
गण्डकीमा थपिए ८५९ कोरोना संक्रमित ४ हप्ता पहिले
श्रेष्ठ र चित्रकारलाई लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गरिने ४ हप्ता पहिले
आइतबार र बिहीबार दुई घण्टामात्र बैंक खुल्ने ३ हप्ता पहिले
राधी विद्युतसहित नौ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति कमाए ? ४ हप्ता पहिले
मूर्तियामा पोखरी खन्ने क्रममा पुरातात्विक आकृति फेला ११ महिना पहिले
यस्तो छ राष्ट्रपति भण्डारी र सीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुका भित्री रहस्य २ वर्ष पहिले
स्तरोन्नतिपछि मनकामना केबुलकार नियमित सञ्चालन २ महिना पहिले
कोरोनाबाट विश्वभर ९ लाख ९३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु ९ महिना पहिले